Saaxiibbada qaaliga ah, barashada Jarmalka, casharkaan, waxaan uga hadli doonaa khudradda Jarmalka. Waxaan baran doonnaa hal-abuurka miraha Jarmalka iyo jamacyada midhaha Jarmalka. Ugu horreyntii, waxaan baran doonaa Jarmalka midhaha ugu badan.
Inta aan baraneyno midhaha Jarmalka, waxaan si wadajir ah u baran doonnaa qoraallada. Intaa waxaa dheer, waxaan diyaarinnay muuqaallo aad u wanaagsan oo ku saabsan miraha jarmalka. Jarmalkii nimcooyinkaas quruxda badan iyo midhihii midabada badnaa ee Rabbigeen inagu maneystay oo leh keli iyo jamac labadaba waan baran doonaa.
Goor dambe, ka dib markii aan wax ka baranay midhaha markii aan u sii gudubno xagga hoose ee bogga, waxaan sameyn doonnaa jumlado Jarmal ah oo ku saabsan midhahan. Waxaan ku siin doonaa macluumaad ku saabsan miraha jarmalka. Tusaale ahaan "Liinta waa jaalle, waxaa ku jira fiitamiin C badan, way wareegsan tahay caafimaadna way leedahayWaxaan ka dhigi doonaa jumlado wargelin ah oo Jarmal ah oo ku saabsan miraha sida ”. Kadib "Waxaan jeclahay tufaaxeed","ma jecli liintaWaxaan soo qaadan doonaa tusaalooyin jumlado ah oo sharaxaya midhaha aan jecel nahay iyo kuwa aanan jeclayn.
Mowduuca miraha jarmalka sida caadiga ah waxaa lagu dhigaa fasalka 9aad ama 10aad. Koorsadani waxay noqon doontaa ardayda iskood u barata Jarmalka, ardayda fasalka 9aad iyo ardayda fasalka 10aad.
Hadda miraha Jarmalka iyagoo wata qoraalladooda iyo keli ahaan iyo jamacyadooda Aan mid mid u baranno midhaha Jarmalka.
Kali iyo jamac Miraha Jarmal Sawirey
DER APFEL - TALO
U Dhimo BIRNE - FARXAD
DARAN DARAN - DARAN
DHAAR MANDARINE - MANDARINE
Dhimashada Cunsuriyada - KHATARTA
DIID QUITTE - AYVA
DIL BANANE - BANANA
DER PFIRSICH - NABAD
U D dhin ZITRONE - LIMO
DIIYA KIWI - KIVI
DIIRO KIRSCHE - CHERRY
Dhimasho APRIKOSE - APRIOT
UGU DHIMAN MELONE - MELON
U Dhimo WASSERMELONE - BIYO
DIIG FEIGE - FIG
KU DIID PFLAUME - BULSHO
U Dhimo ERDBEERE - XADGUDUB
U Dhimo BROMBEERE - BLACKBERRY
U DIID KOKOSNUSS - QALXO
DHIMAN ANANAS - ANANAS
MIRAHA jarmalka ee miiska
Saaxiibbada qaaliga ahow, waxaan diyaarinay miis yar oo hoose si aad u wada wada aragtaan Jarmal iyo Turki labadaba midhaha. Waxaad ku arki kartaan miraha jarmalka wadajir liiska hoose. Tan iyo markii aan ku siinnay midhaha Jarmalka iyo jamacyada sawirrada kor ku xusan, dib uma aanan qorin jamacyada miraha Jarmalka shaxda hoose.
dhimato Birne baaraha
dhiman Orange orange
dhiman Cinab bambeelmo
der Pfirsich fersken
dhinto Aprikose abrikot
dhin Kirsche cherry
dhinto Granatapfel rummaanka
dhiman Quitte quince
dhinto Pflaume Erik
dhinto Erdbeere strawberries
dhinto Wassermelone qaraha
kaligaa dhinta qaraha
dhiman Traube Cinab
dhiman Feige berde
dhiman Kiwi kiwi
dhinto Cananaaska cananaaska
dhin Banane mooska
dhinto Zitrone Beerka
dhinto mispel medlar
dhinto Himbeere miro guduud
dhiman Kokosnuss Hindiya Hindiya
Waxyaabaha laga ogaan karo midhaha Jarmalka
Saaxiibbada qaaliga ah, kor ayaan ku siinnay midhaha Jarmalka muuqaal ahaan iyo qaab ahaanba. Dabcan, ereyadan waxay u baahan yihiin in la xafido, sida ereyada Jarmalka oo dhan, oo ay weheliyaan qodobadooda iyo jamacooda. Intaas waxaa sii dheer, waxaan ku soo sheegnay casharradeenii hore, laakiin aan siino xoogaa macluumaad ah anagoo mar kale xasuusinayna inay jiri karaan saaxiibo aan wax aqrin. Waxaa laga yaabaa inay dareenkaaga qabatay intaad baareysay sawirrada kore.
Maqaalka inta ugu badan magacyada miraha Jarmalka waa "dhinta". Sida lagu arki karo jadwalka kore, kaliya "der Apfel", taas oo ah, qodobka midhaha tufaaxa waa "der". Maqaalka “dhinta” dhammaan midhaha kale waa maqaal.
Ma jiro raasumaal I iyo mid yar oo aan ku leeyahay xarfaha Jarmalka. Si kale haddii loo dhigo, xarafka i ma laha xaraf weyn iyo xaraf I ah. Sidaa darteed, sida eray walba, waxaad u baahan tahay inaad ka taxaddarto higgaadinta miraha Jarmalka.
Waxaan ku soo sheegnay casharradeena hore. Hadday magac tahay magac habboon ama magac jinsi oo Jarmal ah, xarafka ugu horreeya waa qasab in la weyneeyo. Sida ka muuqata muuqaallada kor ku xusan iyo jadwalka, xarfaha hordhaca ah ee magacyada miro Jarmalku marwalba waa la weyneeyaa. Xeerkani wuxuu ku ansaxayaa oo keliya magacyada, laakiin looma adeegsan karo sifooyinka, magac u yaalka, shaqalka, shaqallada.
Jumlado Tusaalooyin ah oo ku saabsan midhaha Jarmalka
Hadda aan ka dhigno jumlado muunad ah oo ku saabsan miraha jarmalka. Waxaan ku sharixi doonnaa jumladaheena muunada ah ee ku saabsan miraha jarmalka, markale caawimaad muuqaal ah. Sawir kasta ka dib, waxaan ku turjumi doonnaa jumladaheenna af Jarmal.
Xeerarka ku saabsan Apple ee Jarmalka
Hadda aan falanqeyno jumladaha sawirka kore. Sidaad arki karto, midhaha kore waa tufaax. Hadda aan falanqeyno weedhahan Jarmal ee ku saabsan tufaax mid mid.
Das ist Ein Obst : Kani waa miro
Mein Lieblingsobst waa Apfel : Midhaha aan ugu jeclahay waa tufaax
Es ist qudhun, kaalay b oder grün : Waa casaan, jaalle ama cagaar
Es ist oval : Waa wareegsan tahay
Es ist gesund : Wuu caafimaad qabaa
Es hat Vitamin B iyo Vitamin C : Wuxuu ka koobanyahay fitamiin OB iyo fitamiin C (wuxuu leeyahay, waxay ka dhigan tahay inuu leeyahay)
Jumlado ku saabsan Mandarin Jarmal
Hadda aan falanqeyno jumladaha sawirka kore. Sidaad arki karto, midhaha kore waa liin dhanaan. Hadda aan falanqeyno weedhahan Jarmal ee ku saabsan tangerines mid mid.
Es ist orange und oval : Waa liin wareegsan
Es hat sehr viel Vitamin C : Waxay ka koobantahay fiitamiin C badan (way leedahay, way haysaa)
Es ist sehr sehr gesund : Aad buu u caafimaad qabaa
Macluumaad Ku Saabsan Canabka Jarmalka
Hadda aan falanqeyno jumladaha sawirka kore. Sidaad arki karto, midhaha kore waa canab. Hadda aan falanqeyno weedhahan Jarmal ee ku saabsan canab mid mid.
Ka dib, kaalay b oder violett sein : Waxay noqon kartaa cagaar, jaalle ama guduud
Es ist klein : Isagu wuu yar yahay
Es hat Kalium iyo Vitamin C : Waxay ka kooban tahay kaalshiyam iyo fitamiin C (way leedahay, way haysaa)
Xukunnada ku saabsan Qaraha ee Jarmal
Hadda aan falanqeyno jumladaha sawirka kore. Sidaad arki karto, miraha kore waa qaraha. Haatan aan falanqeyno weedhahan Jarmal ee ku saabsan qaraha mid mid.
Das ist sehr groß : Tani waa weyn
Es ist ein Obst : Waa midho
Es ist hell grün iyo dunkel grün : Waa cagaar khafiif ah iyo cagaar madow
Es hat Vitamin A, Vitamin C iyo sehr Wasser Waxay ka koobantahay fiitamiin OA, fiitamiin C, iyo biyo badan (waa intaas)
Weedho ku saabsan Liin Jarmal
Hadda aan falanqeyno jumladaha sawirka kore. Sidaad arki karto, midhaha kore waa liin dhanaan. Haatan aan falanqeyno xukunnadan Jarmalka ah ee ku saabsan liinta mid mid.
Das ist ein Obst: Kani waa miro
Es ist gelb und sehr sauer: Waa jaalle aadna u dhanaan
Es ist oval und sehr gesund: Waa wareega (oval) oo aad u caafimaad qaba
Es hat sehr Vitamin C: Waxay ka kooban tahay (leedahay, leedahay) fiitamiin C badan (xad-dhaaf ah)
XUKUNYO TUSAALE AH OO SALAD KU LEH MIDHAHA GERMAN IYO SHARCIGA MÖGEN
Hadda aan qorno jumlado muunad ah adoo adeegsanaya fal. Tusaale ahaan, aan samayno jumlado muunad ah sida aan ka helo miro iyo wax la mid ah mana cuno midhihi caynkaa iyo caynkaas ah Hoos ka daawo sawirrada iyo sharraxaaddooda. Waxaan u isticmaalnay shaqaalaheena mögen iyo essen weedhaheena.Hadii aad rabto, horta aan aragno isku xirnaanta labadan shaqal.
XADGUDUB XAQIIQO AH
er / sie / es cunaa
Sie / sie cunin
Waxaan kor ku soo sheegnay isku shaandhayn ficil ah. Waxaan horey u siinay macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan shaqallada Jarmalka iyo isku xirnaanta shaqsiyaadka casharradeena hore. Hadda aan ku qorno jumlado muunad ah oo ku saabsan miraha jarmalka adoo adeegsanaya maroodiyadan.
Wir mögen Obst: Waxaan rabnaa miro
Ich esse gerne Erdbeeren: Waxaan jecelahay inaan cuno miro yar yar
Ich esse gerne Trauben: Waxaan jeclahay inaan cuno canab
Ich mag Obst nicht: Ma doonayo miro
Saaxiibbada qaaliga ah, Casharkaan ku saabsan miraha jarmalka;
Waxaan ku baranay miraha jarmalka si wadajir ah iyo maqaallo
Waxaan ku baranay miraha jarmalka si wadajir ah iyo jamacooda
Waxaan baranay sida loo qoro weedho bixin kara macluumaad ku saabsan miraha jarmalka.
Waxaan baranay inaan qoro jumlado kale oo muunad ah oo kusaabsan miraha adoo adeegsanaya ficilada sidoo kale.
Asxaabta qaaliga ah, waxaan u maleyneynaa inaad si xushmad leh u xifdin doontaan maadada aan casharkaan ku dhigeyno. Fruit Jarmal (das Obst) ayaa mowduuca ahaa. Waxaan dhihi karnaa magacyada miraha ayaa aad u tiro badan. Liisaska iyo muuqaalada aan kuu diyaarinay, waxaan ku soo darnay Jarmal-Turki u dhigma midhaha ugu caansan ee aan u maleyno inaad u baahan tahay inaad barato. Waan ku tuseynaa Midhaha Jarmalka Kadib barashada magacyadooda, waxaad kuheli kartaa macluumaad dheeri ah adoo adeegsanaya qaamuus hadaad rabto.
Sida aan kusoo xusnay cinwaanka cinwaanka Magacyada miraha jarmalka Waxaad u baahan doontaa inaad xafido intaad wax baraneyso. Qaabka ugu fudud uguna waxtarka badan ee xifdintu waa shaki la’aan habka loo guuriyo xusuusta iyadoo la sawirayo. Waxaad ku samayn kartaa qaabkan adiga oo naftaada waqti ku luminaya gurigaaga sidaasna ku fududeyn kara xoojinta wixii aad soo baratay.
Waxaan kugula talineynaa inaad isku daydo inaad xafiddo magacyada miraha jarmalka adoo diyaarinaya kaararka yar yar oo ay ku yaalliin sawirka midhaha isla markaana hoos ku qor. Marxaladdan, waxaad isticmaali kartaa liiska magacyada miraha Jarmalka ee aan kuu diyaarinnay. Si aanan u ilaawin, waxaan u baahanahay inaan ku xasuusinno inaad xafiddo magacyada miraha iyagoo isla markaana ay la socdaan qoraalladooda marar badan. Waxaan rajeynaynaa inaad caado ka dhigato oo aad u sameyso dhammaan ereygaaga xafidista habkan.
Taasi waa intaas oo kaliya waxaan kaa siin doonaa midhaha ku baxa Jarmalka. Hadda waad hubin kartaa casharradeena kale. Waxaan kuu rajeyneynaa nasiib.
Tags: Midhaha almanta ah ee 10, Midhaha almanta ah ee 11, Midhaha almanta ah ee 9, Magacyada miraha almanta ah, Magacyada miraha almanta ah, Magacyada khudradda miraha ee german, khudaarta miraha ee alman, miraha iyo khudaarta almanta ah, Midhaha Jarmalka iyo jamacyada, weedho qeexaya miraha jarmalka, ha ka sheegin miraha jarmalka, kobcinta miraha jarmalka, Maqaallada miraha Jarmalka, jamac miraha jarmalka, Oraahda Jarmal Mögen, ich weedho mag, magaca miraha, miraha jarmalka, jeermiska miraha